Kismaayo News » Shariif Xasan “Rooboow dalka meeshii doono ayuu ka joogi karaa”
Shariif Xasan “Rooboow dalka meeshii doono ayuu ka joogi karaa”
Kn: Madaxweynaha Maamulka Koofur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo markii ugu horeysay ka hadlay go’aankii dowladda Mareykanka uga xaaqay xayiraadii saarneyd Mukhtaar Roobow ayaa sheegay in arintaasi tahay mid soo dhaweyn mudan.
Isaga oo la hadlayay Idaacada VOA ayaa ku tilmaamay Shariif Xassan tallaabada xayiraada looga qaaday Mukhtaar Roobow in ay wax weyn ka bedeli doonto xasilooni, nabad ku soo dabaalida deegaanada Koofur Galbeed, isla markaana jidadka xiran ay furmi doonaan, isu socodkana uu soo laaban doono.
“Waxaa is leeyahay mar haddii xayiraada laga qaaday in dowladda uu u tago wax dhibaato ay leedahay ma lahan, dalka dowladda Federaalka u talisa, dalka waa dalkiisa, meel walba waa u gudbi karaa, meeshaan wuu joogi karaa, wixii dowladda la garato baa la sameynayaa,”ayuu yiri Madaxweynaha Koofur Galbeed.
Mar uu ka jawaabay su’aal aheyd kaalinta maamulkiisa ka qaadan karo hadii qatar ay soo wajahdo Abuu Mansuur ama Al-Shabaab weeraraan, ayuu sheegay in uusan aaminsaneyn in Al-Shabaab ay weerari karaan maadaama uu deegaanadiisa ku sugan yahay.
“Anniga ila ma’aha Sheekh Mukhtaar oo jooga goboladan, in kooxdaas wax ka qaadi karaan,, hadii wax nooga baahdo waa kaalmeyn doonaa, waxaa aaminsanahay in uu isaga filan yahay oo aan lagu weerari karin goboladan”ayuu yiri Madaxweynaha Koofur Galbeed
Shariif Xassan sheegay in uu maqnaa waqtigii xayiraada laga qaaday Mukhtaar Roobow, isla markaana wixii hada ka dambeeya uu dar ar gelin doono, sidii inta dhiman loo dhameystiri lahaa, isagana uu la xiriiri doono sida uu hadalka u dhigay.